के तपाईं माेबायल फाेन सिरानीमा राखेर सुत्नुहुन्छ ? देखिन सक्छन् यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु - Aamsanchar
के तपाईं माेबायल फाेन सिरानीमा राखेर सुत्नुहुन्छ ? देखिन सक्छन् यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु
शनिवार, पौष १०, २०७८
हामीमध्ये धेरैजसोले पक्कै पनि मोबाइल फोनलाई सिरानीमा राखेरै सुत्छौं। मोबाइललाई सिरानीमा राखेर सुत्दा के हुन्छ ? भन्ने हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। एक हप्तासम्म मोबाइललाई सिरानीबाट टाढा राखेर सुत्नुहोस् अनि आफैं हेर्नुहोस्, तपाईंमा कति परिवर्तन आउँछ। तपाईंले विचार गर्नुभएकै होला, धेरै समय मोबाइलबाट कुरा गरिसकेपछि अलिअलि चक्कर लाग्ने, आलस्य हुने जस्तो भएको। त्यो मोबाइलको रेडिएसनले गर्दा हो। त्यत्ति नै समय हेडफोन प्रयोग गरेर या लाउड स्पिकरमा बोल्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, तपाईंलाई पहिलेको जस्तो हुँदैन।
हामी निदाएको बेला पनि दिमाग सक्रिय नै रहन्छ। दिमागमा अत्यन्तै नाजुक सेल्सहरू हुन्छन्। अन भएको मोबाइल फोन हाम्रो टाउको नजिक धेरै समय रह्यो भने त्यसको रेडिएसनले दिमागमा खलबली मच्चाइदिन्छ। त्यसले दिमागका सेल्सहरू निष्क्रिय पारिदिन्छ। जसले गर्दा साना–साना कुरा पनि याद नहुने, भर्खरै भनेको कुरा पनि बिर्सने, झनक्क रिस उठ्ने आदि जस्ता कुराहरू हामीमा विकसित हुन थाल्छन्। यी कुराहरू बढ्दै गएर अन्तिममा मानसिक सन्तुलन बिग्रने, ब्रेन ह्याब्रेज हुने जस्ता खतरनाक रोग पनि निम्तिन सक्छन्।
त्यस्तै, हामीले चलाउने मोबाइल फोनको ब्याट्री धेरै नटिक्ने झण्झट सबैले बेहोरेकै कुरा हो। मोबाइल चार्ज गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि मोबाइललाई सधैं फुल चार्ज गर्नु हुँदैन र, कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा कम पनि हुन दिनुहुँदैन। महिनामा एकपटक ब्याट्री जिरो बनाएर फुल चार्ज गरेमा ब्याट्रीको लाइफ पनि बढ्छ र फोनको काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। राति मोबाइल चार्जरमा जोडेर छोड्ने बानी छ भने पनि त्यो गर्न बन्द गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा बिजुलीको गडबडीले मोबाइल पड्किन सक्छ। मोबाइल चार्जमा जोडेर कहिल्यै चलाउनु हुँदैन। यसो हुँदा कहिलेकाहीँ मोबाइलमा धेरै प्रेसर पर्छ र हातैमा ब्लास्ट हुन सक्छ। पावर बैंक, डुप्लिकेट चार्जर वा अन्य फोनका चार्जर जोड्नु हुँदैन।
त्यसैले आजैदेखि मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिऔं। आफ्नो परिवार, साथीभाइ सबैलाई जानकारी दिनुहोस्। ताकि हाम्रो समाजमा मोबाइलको रेडिएसनबाट बच्न केही योगदान पुगोस्। अब जानौं मोबाइलका बारेमा केही रोचक तथ्य,
– विश्वभर सय जनामा ८० जनाले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन्।
– सन् १९७३ मा सबैभन्दा पहिलो मोबाइल फोन बनाइएको थियो। जुन मोटोरोला कम्पनीको थियो।
– नोकिया ११०० फोन अहिलेसम्मको सबैभन्दा २५० मिलियन प्रतिभन्दा बढी बिक्री भएको फोन हो।
– मलेसियामा मोबाइलबाट टेक्स्ट म्यासेज गरेर डिभोर्स दिन सकिन्छ। जुन कानुनी रूपमा मान्य छ।
– फिनल्यान्डमा मोबाइल फोन फ्याँक्ने खेल आधिकारिक रूपमा खेलिन्छ।
– ट्वाइलेटको ह्यान्डलभन्दा मोबाइल फोनमा १८ गुणा ज्यादा ब्याक्टेरिया हुन्छन्।
– मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिले औसतमा प्रतिदिन सय पटकभन्दा बढी मोबाइल लक–अनलक गर्छन्।
– ब्रिटेनमा प्रतिवर्ष १ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन
– मोटोरोला कम्पनीका एक कर्मचारी मार्टिन कपुरले ३ अप्रिल १९७३ मा पहिलोपल्ट मोबाइलमा फोन गरेका थिए।
– मोबाइलबाट पहिलो म्यासेज नील पोप्वार्थले पठाएका थिए। जसमा लेखिएको थियो ‘म्यारी क्रिसमस’। (एजेन्सीको सहयोगमा)
चारपानेमा योग दिवस मनाइयो
जाडो महिनामा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती
बुधवार, पौष २१, २०७८
वैवाहिक जीवन सुखमय बनाउने सुत्र